यौन मनोविज्ञान Archives - Hamro eSansar
Tag: यौन मनोविज्ञान
January 29, 2018 January 30, 2018 adminLeaveaComment on म १९ वर्षीय युवक हुँ । धेरै वर्षअघिदेखि मलाई एउटा समस्या छ । म दिनको दुई पटक हस्तमैथुन गर्छु । मेरो समस्या के छ भने जब म आफ्नी गर्लफ्रेन्डलाई किस गर्छु मलाई यौनसम्पर्क गर्न मन लाग्छ, तर उनी त्यसो गर्न दिन्नन् । त्यसपछि मेरो तल्लो पेट र अण्डमा पीडा हुन्छ । यो के भएको हो ? यो समस्या समाधानका लागि मैले के गर्नुपर्छ ?
म १९ वर्षीय युवक हुँ । धेरै वर्षअघिदेखि मलाई एउटा समस्या छ । म दिनको दुई पटक हस्तमैथुन गर्छु । मेरो समस्या के छ भने जब म आफ्नी गर्लफ्रेन्डलाई किस गर्छु मलाई यौनसम्पर्क गर्न मन लाग्छ, तर उनी त्यसो गर्न दिन्नन् । त्यसपछि मेरो तल्लो पेट र अण्डमा पीडा हुन्छ । यो के भएको हो […]
January 24, 2018 January 24, 2018 adminLeaveaComment on छोरो जन्माउने उपाय पत्रिकाले सिकाए पछि…
छोरा वा छोरी जन्माउने कुरा हामीले चाहेर हुने होइन विज्ञानले भन्छ बच्चाको लिंग पुरुषको शुक्रकिट र महिलाको डिम्बमा रहेको क्रोमोजोमले निर्धारण गर्दछ । महिलाको एक्स क्रोमोजोम र पुरुषको वाइ क्रोमोजोमसँग मिल्यो भने छोराको जन्मिन्छ भने एक्स एक्स अथवा वाइवाइ क्रोमोजोम मिल्यो भने छोरी जन्मिन्छ । तर भारतबाट प्रकाशित हुने पत्रिकाले भने छारा जन्माउने घरेलु तरिका […]
महिलालाई राती एव पुरुषलाई बिहान किन यौन चाहाना बढी हुन्छ ? यस्तो छ रोचक कारण !
January 15, 2018 January 17, 2018 adminLeaveaComment on महिलालाई राती एव पुरुषलाई बिहान किन यौन चाहाना बढी हुन्छ ? यस्तो छ रोचक कारण !
सामान्यतः मानिसहरु यौनको बारेमा धेरै कुराकानी गर्न रुचाउँदैनन् । तर सुखद जीवनको लागि यौन जीवन पनि सुखद हुनु जरुरी छ । यसको लागि यौनबारेमा एकअर्कामा खुलेर कुरा गर्ने वातावरण हुनुपर्दछ । जसरी जीवनमा खाना, निन्द्रा र अन्य दैनिक काम जरुरी छ, सेक्स पनि त्यतिकै जरुरी छ । हाम्रो समाजमा यौनकै कारण कतिपय परिवार भाँडिएको छ, […]
January 10, 2018 adminLeaveaComment on यौन सम्पर्क गर्ने बितिकै के के गर्नु हुदैन, जान्ने पर्ने यी ५ कारण
सेक्स गरिरहेका बेला एक अर्कालाई भरपूर सन्तुष्टि दिन महिला अथवा पुरुष दुबैले धेरै मेहनत गरिरहेको हुनसक्छ । सेक्सका दौरान अपनाइको तरिकाले सन्तुष्टि पनि देला तर सेक्स गरे लगत्तै तपाईंको पार्टनर पढ्न बस्नुभयो भने तपाईंलाई कस्तो महसुस होला हो, सेक्सपछि गरिने यस्तै गल्तीहरु जुन तपाईंले गल्ती गरेको महसुस नगरेपनि यसले तपाईंको पूरै सेक्स लाइफलाई नै बरबाद […]